Shikhar Samachar | श्रीमान बेपत्ता, छोरा अपाङ्ग : कृत्रिम हात फेर्ने आमाको सपना श्रीमान बेपत्ता, छोरा अपाङ्ग : कृत्रिम हात फेर्ने आमाको सपना
श्रीमान बेपत्ता, छोरा अपाङ्ग : कृत्रिम हात फेर्ने आमाको सपना
कृत्रिम हातका लागि सहयोग गरिदिन अपिल
मजदुरीमा छाक टार्दै विष्ना
डोटी- शिखर नगरपालिका–१० बानेडुग्रीसैनकी विष्नादेवी ठगुन्नाले केही वर्ष अघि दुई नाबालक छोरा काखमा च्यापेर श्रीमानलाई छिमेकी मुलुक भारतका लागि बिदाइ गरिन् । भारतबाट श्रीमानले कमाएको खर्चले तेल सावुन अनि लुगाफाटो फेर्ने र आफु घरायसी खेतिपातीबाट अन्न जोडेर जीपिकोपार्जन गर्ने झिनो सपना सहित श्रीमानलाई बिदाइ गरेको उनी बताउँछिन् । श्रीमान रोजगारीका लागि भनेर भारत पसेको आठ वर्ष बितिसकेको छ तर विष्नाको त्यो झिनो सपना कहिले पुरा भएन ।
रोजगारीका लागि भारत गएका उनका श्रीमान योगेन्द्र ठगुन्ना भारत पसेदेखि बेपत्ता छन् । भारत गएको आठ वर्ष भैसक्यो विष्नाले गहभरी आँशु पार्दै भनिन्,‘न कुनै खबर छ, न फोन, न चिठ्ठी पत्र, न त कुनै नासो । गाउँभरीका दाजुभाई भारतबाट चाडपर्वको मौका पारेर कयौं पटक आए–गए तर म र मेरा सन्तान सधैं बाटो कुर्दै बसेउँ । अब त फर्किन्छन् भन्ने आश नै मरिसक्यो ।’
दुई छोराकी आमा विष्ना पछिल्लो समय दैनिक मजदुरी गरेर साँझ–बिहान हातमुख जोड्ने गर्छिन । जेठो छोराको साहारामा जसो तसो जीवन चलाई रहेकी उनको जीवनमा गत वर्ष ठुलो बज्रपात आइप¥यो । विष्ना मजदुरी गर्न बाहीर गएको समयमा खाना पकाउने देखी बाख्रा चराउने जस्ता कार्यमा सघाउँदै आएका उनका नाबालक १२ वर्षीय छोरा सतीशले करेण्ट लागेर दुबै हात गुमाउनु प¥यो । स्यानै भएपनि आमाको साहारा बनेका सतीशले दुबै हात गुमाए पछि विष्नाले दिँसापिसाव गर्दा समेत छोरालाई डो¥याउनु परेको छ । छोराको यस्तो हालतले मजदुरीमा जान समेत बाधा पुगेको विष्ना बताउँछिन् । ‘स्यानै भए पनि छोरा साहरा बनेको थियो, घरको काममा सघाउदै आएको थियो विष्नाले भावुक हुँदै भनिन्,‘घटना पछि बढी जसो उस्कै स्याहारमा समय बित्ने गरेको छ । मजदुरीका लागि समय कम हुन्छ कमाइ पनि त्यस्तो हुँदैन । पीडा माथि झन् पीडा थपिएको छ ।’
यसरी गुमे सतीशका दुबै हात
गत वर्ष कार्तिक १६ गते विद्यालयको विदा पछि सतीश बाख्रा चराउँन निस्किएका थिए । आफ्ना केही साथीहरुसंगै नदिको किनारमा बाख्रा चराउँदै गर्दा नजिकैको बेबरीको रुखमा उनको नजर पुग्यो । बेबरी टिप्न भनि उनको हात लम्कियो । बेबरीको झाल नजिकै विद्युतको ट्रान्समिटर थियो । बेबरी टिप्न खोज्दा उनलाई करेण्ट लाग्यो । घेरबार समेत नगरेर भुईछुने गरी राखिएको ट्रान्समिटरबाट करेण्ट लागेपछि उनि घाइते भए ।
करेन्ट लागेपछि उपचार गर्न काठमाण्डौँ पु–याईएको अवस्थामा लिईएको तस्बिर।
गम्भिर घाइते उनलाई उपचारका लागि नजिकै शिखर नगरपालिकामै रहेको बिटी पोलिक्लिनिक लगे । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि डडेल्धुरा अस्पताल हुँदै धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पतालमा पु¥याइयो । त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि घाइते सतीशलाई काठमाण्डौँ पु¥याईयो ।
काठमाण्डौँको किर्तिपुर अस्पतालमा एकमहिनासम्म उपचार भयो । त्यसक्रममा उनको ज्यान त जोगियो तर दुबै हात सधैँका लागि गुमे । हात बचाउनका लागि डक्टरले धेरै प्रयास गरे पनि पछि गएर क्यान्सन हुन सक्ने सम्भावना भएकाले दुबै हात काट्नु परेको सतीशका छिमेकी हजुरबुवा तारासिँह ठगुन्नाले बताए ।
त्यतिसम्मको उपचारमा करिब सातलाख रुपैयाँ खर्च भयो । उनको सो उपचार खर्च पुल निर्माणकर्ता कम्पनी राजेन्द्र निर्माण सेवाले ब्यहो¥यो । केही मनकारी व्यक्तीहरु र शिखर नगरपालिकाले थप सहयोग गरेपछि उपचार सम्भव भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने कुनै सहयोग गरेन । घटनाको तिनदिनभित्र निवेदन नपरेकाले सहयोग गर्न नसकिने भनिएको आफन्तहरुको गुनासो छ । ‘बच्चालाई करेण्ट लागेपछि हामी उपचारको दौडधुपमा लाग्यौ सतीशका छिमेकी हजुरबुवा तारासिँहले भने,‘विद्युतमा धाउन पाइएन, विद्युत कार्यालयमा पछि जाँदा तीन दिन भित्र निवेदन नपरेकाले केही सहयोग गर्न नसकिने भनेपछि फर्कियौं ।’
कृत्रिम हातको चाहना
दुबै हात गुमेपछि सतीश र उनको परिवारको दैनिकी निकै बद्लिएको छ । उनी न्यास्रो मानेर बसिरहन्छन् । हरेक काममा परिवारको सहयोग चाहिन्छ । परिवारमा आमा विष्नादेवी, हजुरआमा कलुदेबी र एक भाई छन् । आमा र हजुरआमामध्ये एकजनाले उनको दैनिकीमा सघाउ गरिरहनुपर्छ ।
‘पहिले पानी बोक्ने, तरकारीको जोहो गर्ने, खाना पकाउने काम उही गथ्र्यो,’ उनकी आमा विष्नादेवीले गहभरी आँशु पार्दै भनीन्,‘अहिले खाना, सरसफाई, दिसापिसाब सबैमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’
उनलाई सबैभन्दा बढी पीडा सतीशको पढाईको छ । ‘यिनै छोरालाई पढाएर सहारा लिउला भन्ने थियो । अब त केही लेख्नै सक्दैन् । आफै किताब समातेर पढ्न सक्दैन । यो देख्दा मन भक्कानिईरहन्छ,’ उनले थपिन् । सतीश अर्काको सहयोगमा परीक्षा दिएर यसवर्ष कक्षा पाँचमा प्रवेश गरेका छन् ।
छोराको भविष्यका लागि विष्नादेबीले गिट्टी फोरेर, ज्यालामजदूरी गरेर कक्षा तीनसम्म बोर्डिङ पढाएकी पनि थिईन् । धान्नै नसकिने भएपछि चार कक्षाबाट गाउँमै रहेको सामुदायिक विद्यालय सिद्धेश्वर आधारभूत विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य भएको सुनाउछिन् ।
उपचारका क्रममा कृत्रिम हात राखेर आंशिक रुपमा हातको काम लिनसकिने सुनेपछि विष्नादेवीको ध्यान सोहीमा केन्द्रीत छ । ‘त्यो हात राख्नसके पढ्न–लेख्न र केही खाना खान पनि सहयोग हुन्छ रे,’ उनले भनिन्,‘त्यो हाल्नसके छोराको जीवन बनाउन सकिन्थ्योकी भन्ने आशा छ ।’
कृत्रिम हात हाल्न ५०–६० लाखसम्म लाग्नसक्ने ठगुन्ना परिवारले सुनेको छ । ‘डक्टरले आशा देखाएका छन् । तर, ५०–६० लाख लाग्छ भन्ने सुनियो,’ उपचारमा गएका सतीशका छिमेकी हजुरबुवा तारासिँह ठगुन्नाले भने,‘यत्रो रकम कहाँबाट जुटाउने ? उनीहरुको अवस्था नाजुक छ । हामीसंग त्यत्रो सम्पत्ती छैन् ।’
तर विष्नादेबीले हिम्मत भने हारेकी छैनन् । उनी रातदिन ढुंगागिट्टी फारेर, मजदूरी गरेर सो रकम जुटाउने कसरतमा छिन् । यसक्रममा डेढलाखसम्म रकम जम्मा गरेको उनले बताईन् ।
विष्नादेवीले दिनरात एक पारेर मेहनत गरेपनि सतीशको कृत्रिम हात हाल्ने सपना सजिलो छैन् । उसैपनि ठगुन्ना परिवार निकै विपन्न छ । एउटा घरमा तीन परिवार बस्छन् । तीनवटै परिवारको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक छ । दिनहुँ छाक टार्न समेत धौ–धौ छ ।
विष्नादेबीसंग त्यो खर्च जुटाउन न श्रीमान साथमा छन्, न कमाईको ठुलो स्रोत ! त्यसैले उनी आफ्नो कलिलो छोराको जीवन अन्धकारबाट बचाउन सबैसंग सहयोगका लागि अपिल गर्छिन् । ‘बेसहाराको भगवान सहारा हुन्छ भन्छन् । हाम्लाई पनि कोही भगवान सहारा अवश्य देला,’ उनि भावुक हुँदै भन्छिन्,‘भगवान बनेर सक्दो सहयोग गरिदिन सबैमा अनुरोध गर्छु ।’
सहयोगी हातहरुका लागि उनको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक किर्तिपुर शाखामा सतीश ठगुन्ना नामबाट ( खाता नं. ११७०००००३२१ R ) उपचार खाता खोलिएको छ । सतीशका परिवारले उनको कृत्रिम हात हाल्नका लागि सहयोग गरिदिन अपिल गरेकाछन् ।